ကွတ်ကျွန်းစုများယုံကြည်ကိုးစားပါ - အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းယာဉ်
A ကွတ်ကျွန်းစုများယုံကြည်ကိုးစားပါ အာဏာအရှိဆုံးပေး ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု. အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုတောင်ပိုင်းဟာဝိုင်ယီ၏အမေရိကန်ပြည်နယ်၏တည်ရှိပြီးနေကြသည်။ သူတို့ကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးကြီးစိုးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှုအမှုဥပဒသမိုင်းပြ။ ဒါဟာသီအိုရီကာကွယ်မှုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တရားရုံးစမ်းသပ်ဖို့ထားကြပြီရှိသမျှအမှုအပေါ်ကျယ်ပြန့်သုတေသနကောက်ယူကြသည်။ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တိုင်းအမှု၌, တစ်ဦးစနစ်တကျထူထောင်ယုံကြည်မှု client ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ - - ယုံကြည်မှုကိုထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တအများစုကအထူးသ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဥပဒေရေးရာအင်အားကြီးသောကိစ္စနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုမှာအရေးကြီးသောမှတ်ချက်: ကျနော်တို့သိလျက်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ပါဘူး ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးရန်။ ကျနော်တို့မျှသာတစ်ခုလေ့လာရေးလုပ်နေပါတယ်။
ဘယ်လိုကွတ်ကျွန်းစု Trust မှငါ့ကိုကာကွယ်ပါပါသလား?
သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးကတရားရုံးတွင်သငျသညျအတူတူစာတစ်စောင်ဝတ်နှင့်ဂေါပကကမေးလ်, "။ ကိုပိုက်ဆံပေးပါ" ဟုဆိုဒါ။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံတရားသူကြီးကရန်ပုံငွေများကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာသင်တို့ကိုအမိန့်ချမှတ်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့ကိုအကြောင်းကြား။ အဆိုပါဂေါပကယုံကြည်မှုကိုရေးဆွဲသောအပေါ်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သောကွတ်ကျွန်းစု Trust မှလုပ်ရပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခိုလှုံဂေါပကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတရားရုံးထံမှအင်အားသုံးအောက်မှာသရုပ်ဆောင်သောအခါယုံကြည်မှုကိုထဲကရန်ပုံငွေများတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခြင်းမှကာကွယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး၏လက်လှမ်းမမီပြင်ပတွင်နေထိုင်သူဂေါပက, လိုက်နာရန်ငြင်းဆန်။ သငျသညျလိုလိုလားလားတရားသူကြီးရဲ့အမိန့်နာခံခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်ဆောင်ကြဉ်းရန်ဂေါပကတောင်းဆိုနေတာကြောင့်သင်တို့ကိုနှောင့်ရှက်၌နေကြသည်မဟုတ်။ သငျသညျဆက်ဆက်တရားဝင်ကာကွယ်ရေးများအတွက်တရားဝင်သည်အရာတစ်ခု "ဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်," အနေအထားပါပဲ။
တစ်ကွတ်ကျွန်းစု Trust မှတညျဆောကျပုံလုပ်နည်း
အရပျကိုယူပြီးက "မကောင်းတဲ့အရာ" ကိုမတိုင်မီကသင်သည် (ထိုယုံကြည်မှု၏အကျိုးခံစားနေသော) အပြည့်အဝထိန်းချုပ်၌ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့်သင်နေ့စဉ်ဘဏ္ဍာရေးရေးရာစီမံခန့်ခွဲ။ ဒီကုန်ပြီအဆိုပါလမ်းကျနော်တို့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကမ်းလွန်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီ (LLC) ။ ယုံကြည်မှုကို LLC သည်၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်။ သင်ကကမ်းလွန် LLC ၏ Manager ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်က LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဘဏ်အကောင့်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ထိုးသူဖြစ်ကြသည်။ ထိုမှတပါး, သင်ကွတ်ကျွန်းစုများတွင်အကောင့်အမျိုးမျိုးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံဆိပ်ကမ်းလှမ်းသောကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသညျ့နိုငျငံတှငျဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
က "မကောင်းတဲ့အရာ" ထသီးနှံကိုသည့်အခါထို့နောက်အဆိုပါဂေါပကသင်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကကွတ်ကျွန်းစုများအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သောဂေါပကကုမ္ပဏီ, ရိုးရိုး LLC မန်နေဂျာအဖြစ်သင့်နေရာယူသည်။
ငါ Trustee ယုံကြည်နိုင်ပါသလား?
အဘယ်အရာကိုဒီကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတခုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကော? နှစ်ဦးကအရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံရေး features တွေကိုပုကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှု၏ဂေါပကတစ်ဦးလိုင်စင်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ လိုင်စင်ရယူနိုင်ရန်ဂေါပကနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများ grueling ခံကြရပေမည်။ အဆိုပါနှောင်ကြိုးသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေဂေါပကအရေးယူမှုကနေအာမခံထားကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုမှတပါး, ကျွန်တော်တို့ဟာ 20 နှစ်အတွင်းဘို့နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြတဲ့ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီအသုံးချရန်။
client ကို၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဘို့, ဂေါပကယေဘုယျအားအတွက်ခြေလှမ်းနိုင်သည့်အတွက်တစ်ဦးတည်းသာဥပမာအားဖြင့်တရားရုံးငွေကိုသိမ်းယူမည်ဟုတဲ့အခါမှာအဲဒီကား, သူတို့ကသာအတွက်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရှိသေး၏။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီတော့ရှိုးဖို့အရေးကြီးသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တရားရုံးများကသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းငွေကိုတစ်ဦး 100% အခွင့်အလမ်းပိုနှစ်သက်ပါ့မလား သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးကို client ကနေပိုက်ဆံယူတော့မှထားပါတယ်တဲ့အပြည့်အဝလိုင်စင်ရ, ကပ်လျက်တည်ရှိဂေါပကကုမ္ပဏီရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်မယ်လို့, သင်ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ကိုပေးဆောင်ထားသောလုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်။ သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံယူပြီးမှသင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒါကဖြစ်လျက်ရှိ?
က "မကောင်းတဲ့အရာ" ဝေး်လည်းကြွေတတ်တပြိုင်နက်, ထိန်းချုပ်အနေအထား, LLC သည်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, သင်တို့ဆီသို့ပြန်ရောက်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့လုံခြုံနှင့်အတူပြန်လေယာဉ်မှူးရဲ့ထိုင်ခုံ၌ရှိကြ၏။
သငျသညျပေးဆောင်လိုအပျကွောငျးပစ္စည်းများရှိပါကထိုအတောအတွင်းဥပဒေရေးရာခြိမ်းခြောက်မှုကာလအတွင်းမှာသည်, ဂေါပကသင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ဂရုစိုက်နိုင်ပါ။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးချင်းစီရန်သင့်ရန်ပုံငွေအချို့ကို forward ဖို့ဂေါပကတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သူတို့က, အလှည့်တွင်, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့ပိုက်ဆံပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဆဲသင်တို့ငွေကိုလက်ခံရရှိရန်စွမ်းရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာရန်သူများကိုမကျင့်။
အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုလုံခြုံနိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ထဲမှာကျင်းပငွေသားသည်ပေးပါသည်။ အမေရိကန်တရားရုံးများကအမေရိကန်အကောင့်ကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်ရန်ပုံငွေများဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းတစ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အစုစုကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်စေမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်သင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်သင်ကျင့်သောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်လုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်ပါတယ်။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, တဖန်, ဘဏ်အကောင့်ကွတ်ကျွန်းစုများအတွက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ယုံကြည်မှုဆန့်ကျင်သည်နိုင်ငံခြားအရပ်ဘက်တရားရုံးအမိန့်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူးကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပြုလုပ်မြဲမြံစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာဥပမာ, ဆွစ်ဇာလန်, လူဇင်ဘတ်, ပနားမား, ဟောင်ကောင်နှင့်စင်္ကာပူဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျဒေသခံအိမ်ခြံမြေသိမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိနထေိုငျရှိရာတရားရုံးများ။ သို့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုကပိုင်ဆိုင်ကြောင်း LLC သည်၏အတွင်းပိုင်းအိမ်ခြံမြေနေရာဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်, သင် lien ယုံကြည်မှုကို၏အတွင်းပိုင်း LLC သည်မှပေးဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိအိမ်ခြံမြေဆန့်ကျင်နေတဲ့ lien မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပျက်ပါကသင်ကတရားရုံးဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြင့်လုံးလုံးလြားလြားအိမ်ခြံမြေဆုံးရှုံးဖို့ထက်ရောင်းဖို့ဂရုမစိုက်ပါဘူးသောအစစ်အမှန်အိမ်ခြံမြေရောင်းဖို့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူသည်တစ်ခုမှာ Up ကို Set နိုင်သလား?
ကျနော်တို့အဘို့ကြီးစွာသောအများအပြားကွတ်ကျွန်းစုကိုး စား. တည်ထောင်ရန် ရှေ့နေများ အဘယ်သူသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်သူတို့ကို re-ရောင်း။ ကျနော်တို့အဘို့များစွာသောကိုး စား. ကိုလည်းတည်ထောင် တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ, အဘယ်သူသည်ခိုင်ခံ့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်လိုအပ်ပါပြီ။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်မှုအတွက်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း verbiage ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအသေခံသောအခါ, ယုံကြည်မှု၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားသင့်ရဲ့ရွေးချယ်သင်၏သားသမီးသို့မဟုတ်အခြားသူများအားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ Semi-ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်, ထို settlor အဆိုပါဂေါပကရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ settlor တိုက်ရိုက်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ပေးနိုင်လျှင်, တရားသူကြီးကိုထိန်းချုပ်သော settlor အသုံးပြုမှုကိုအတင်းနိုင်ဘူး။ သူသို့မဟုတ်သူမသည် settlor ရဲ့ရန်သူများကို-မှာ-ဥပဒေအသစ်ကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်စေခြင်းငှါ settlor အတင်းလိမ့်မယ်။ ကြောင်းဖြစ်ရပ်အတွက်တာဝန်ခံတစ်ဦးတည်းသာတရားသူကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဂေါပကယုံကြည်မှုကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမိန့်ပြောင်းလဲမှုများများအတွက်လုံခြုံမှုအဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကန့်သတ်တစ်ခုပညတ်တော်အတိုင်းဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ခဲ့များအတွက်သတ်မှတ်အချိန်ကန့်သတ်သည်။ ဒါ့အပြင်လိမ်လည်လွှဲပြောင်းအဖြစ်လူသိများလိမ်လည်စီးအနင်း, အခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity မှပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကြွေးမြီပေးဆောင်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသည်။ က "f", စကားလုံးရှိပါတယ်သော်လည်း, တကလူထုအခြေပြုအရေးယူမှုနှင့်မရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လိမ်လည်လွှဲပြောင်းအပေါ်ကန့်သတ်နေတဲ့ပညတ်တော်အတိုင်းတပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူရန်ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှုဆောင်ရွက်ရန်အခြားပါတီများအတွက်စွမ်းရည်ကိုချွတ်လျှော့ချအခြားမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းထားသည်ဖြစ်သောပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိကိုရည်ညွှန်းသည်။
သငျသညျနှစျခုနာရီအတှငျးရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထားတစ်ချိန်ကကွတ်ကျွန်းစု Trust မှအဘို့, တစ်ပြိုင်နက် ticking ကိုစတင်ပါ။ တစ်ကွတ်ကျွန်းထဲကပိုင်ဆိုင်မှုရရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကွတ်ကျွန်းစုများတွင်စာရွက်စာတမ်းများတစ်ခုကိုဖြည့်အချိန်ကန့်သတ်ယုံကြည်မှုကိုရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်အရေးယူမှုများ၏အကြောင်းရင်းထဲကနေသောအချိန်ကနေတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အခြားဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုယူဆောင်လာရန်ခွင့်ပြုသောဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးကကားကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုလုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းမရှိ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဥပမာစာချုပ်၏ဖောက်ဖျက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ရဲ့သင်သည်သင်၏ကားထဲတွင်နောက်ဘက်အဆုံးတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါနှင့်ချက်ချင်းကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုထူထောင်ကြကုန်အံ့။ ခြောက်လအကြာမှာသင်တရားစွဲရ။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ကောင်းတစ်နှစ်ခန့်ကြာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအယူခံနှင့်အခြားခြောက်လကြာနိုင်ပါသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမလိုခဲ့လျှင်အားလုံးပြီးဆုံးချိန်, သင့်ပြိုင်ဘက်ပင်ကွတ်ကျွန်းစုဖို့တရားစွဲဆိုမှုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး။
သူတို့ကကွတ်ကျွန်းစုများတွင်နာရီရိုက်နှက်ခဲ့တယျရင်တောင်သည်အခြားနီးပါးကျြောလှားနိုငျအတားအဆီးရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးသူတို့အနေနဲ့အလွန်အမင်းစျေးကြီးဥပဒေရေးရာစစ်တိုက်တစ်သမုဒ္ဒရာဝေးကိုတိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့သည်သင့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်မြီရှင်ဖိနှိပျဖို့ယုံကြည်မှုထဲသို့ပိုက်ဆံသွင်းထားတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယတစ်ဦးအရိပ်ထက်ကျော်လွန်သက်သေပြဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ မဟောင်းကြွေးရှင်, စိတ်သဘောကိုသင်တို့ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်တဦးတည်း။ သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာကိုး စား. တက် setting ဘို့ပေးနိုငျကွောငျးအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပါးလာ stifling စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအခြားဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီထုံးစံ၌တစ်ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးထူထောင်ထားသောကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ settlors သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမဆိုတခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး။ သောဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကိုကန့်သတ်မီသို့မဟုတ်အပြီးယူဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတရားစွဲဆိုတရား၏ကုန်ကျစရိတ်အောင်ပွဲ၏ infinitesimally သေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းအဆမတန်ဆုံးရှုံး၏အလားအလာကိုနိုင်အောင်ကျြောလှားနိုငျကွောငျးကိုကိုမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါသလား? ကျနော်တို့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကိုးဆယ်ကတည်းကကွတ်ကျွန်းစုကိုး စား. တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလ၌, created တထောင်အများအပြားကိုး စား. နှင့်အတူကျနော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ထဲမှာကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုသို့ရန်ပုံငွေထားရှိထားပြီးသူတစ်ဦးကို client ဆုံးရှုံးပိုက်ဆံမရှိစံချိန်ရှိသည်။ ယုံကြည်မှုကိုစိန်ခေါ်ထားပြီးဘယ်မှာအမှုဥပဒေ,, ကအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဝေးအသုံးပြုပုံသို့သော်တရားလိုသို့မဟုတ်တရားသဖြင့်စီရင်ကြွေးရှင်ကွာသူတို့အရပ်ဌာန၌ယုံကြည်မှုသိမြင်တဦးတည်းတတ်၏။
ယုံကြည်မှုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ဘယ်သူကိုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတရားရုံး၏မထီမဲ့မြင်များအတွက်အကျဉ်းထောင်နေခဲ့သော client များအဆိုပါ Anderson ကဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမေးမွနျးရာအနည်းငယ်သာဓကရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Anderson များအတွက်ယုံကြည်မှုထူထောင်သူရှေ့နေမှားယွင်းစွာပြုလုပ်ထူထောင်: ဒီရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေ့နေဟာ Anderson ဟာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ (အခြေခံအားဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သူ) အဖြစ် (ထိုဂေါပကတို့ကိုသွန်သင်နိုင်သူ) ကိုကာကွယ်နှစ်ဦးစလုံးအောင်ယုံကြည်မှုကိုတက်ရေးသားခဲ့သည်။ ဤသည်၎င်းတို့၏ရှေ့နေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အလွန်ဆင်းရဲတရားသဖြင့်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်တရားသူကြီးကြောင့် Anderson တို့ရဲ့အစသူတို့ကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးကာကွယ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည် "ဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်။ " ဒီအလွန်ကောင်းသောသတင်းယုံကြည်မှုကိုညံ့ဖျင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ပေမယ့်, ကဆဲ Anderson တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေး, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါကိစ္စတွင်ထို့နောက်ကွတ်ကျွန်းစုများနှင့်နယူးဇီလန်အတွက်တရားသူကြီးယုံကြည်မှုကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောကျပငျ့ဘယ်မှာကွတ်ကျွန်းစုသို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ Anderson တို့၏ငွေလုံခြုံစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုအတွက်မွေးရာပါအင်အားကြီးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအဖြစ်အလွန်အားကောင်းတဲ့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကိုလုပ်ရပ်လျြောရေးသားခဲ့တောင်မှသောအခါ, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအားကောင်းတဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်။
သူတည်စေမိမိယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပုံရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သူကကျနော်တို့ကိုဆွေးနွေးနေကြသည်ယုံကြည်မှုကိုအပါအဝင်အခြားရွေးချယ်စရာ, downplays သူကိုထွက်အဲဒီမှာအထူးသဖြင့် service provider ကအလွန်သတိထားရလိမ့်မည်။ သူကအားနည်းဒေသခံယုံကြည်မှု setup ကိုရှိပြီး, ဤသို့လူအပေါင်းတို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာ downplays ။ သူကကွတ်ကျွန်းစုများအတွက်ယုံကြည်မှုဖေါ်ပြခြင်းသက်သေပြကိစ္စတွင်ဥပဒသမိုင်းတွင်အကြိမ်ကြိမ်သူ့ဟာသူခိုင်မာတဲ့ပြသခဲ့သည်လည်းမရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှု။ ဒေသခံယုံကြည်မှုအတွက်မွေးရာပါအားနည်းခြင်းကြောင့်ဒေသခံတရားသူကြီးများ၏နှာခေါင်းအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကွတ်ကျွန်းစုသရုပ်ပြဟာသူမတူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခွန်အားနှင့်, လယ်ပြင်၌ကျွန်တော်တို့အများစုကတစ်လျှို့ဝှက်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ကရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်သူသဘောတူသည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားယုံကြည်မှုအမျိုးအစားကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေးထားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောနေးဗစ်ကဲ့သို့သောအခြားကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုရှိပါတယ်, အန်ဂွီလား, ဘာဘေးဒိုးစ နှင့်အခြားသူများ။ အမှုဥပဒသမိုင်း၏ in-depth ကိုသုတေသနကွတ်ကျွန်းစုအထိရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုပူဇော်လေ့ကြောင်းပြသထားတယ်။